အိမ်ဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီလား? သင့်ကို ဒီ (၁၀) ချက်က ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်! - Myanmar Real Estate Exchange
အိမ်ဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီလား? သင့်ကို ဒီ (၁၀) ချက်က ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်!
သင့်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံထဲမှာ အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်နေပြီလား။ အိမ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်မှန်းထားတဲ့အိမ်မျိုးဝယ်ဖို့ စဉ်းစားရတာ ရှုပ်ထွေးပြီး ခေါင်းခဲနေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အိမ်ဝယ်တော့ မယ်ဆိုရင် သိသင့်ရမယ့်အချက်တွေကို ကြိုတင်လေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အခုလိုမျိုး ခေါင်းခဲနေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ အိမ်ဝယ်ခြင်းအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ခြင်း နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြည့်စုံတဲ့ နေရာမှာ ပြည့်စုံတဲ့အိမ်တစ်လုံးမရှာခင်မှာဘဲ အိမ်ဝယ်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ ဒီအချက်တွေကို အရင် သိထားသင့်ပါတယ်။
အဆင့်(၁) - သင့်ရဲ့ဘဏ်စုငွေနှင့် ချေးငွေစာရင်းကို အရစ်စစ်ပါ။
ငွေချေးကုမ္ပဏီကို မဆက်သွယ်ခင် သင့်မှာရှိတဲ့ ချေးငွေကို ဦးစွာစစ်ထားပါ။ သင့်သုံးစွဲမှုအတွက် ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာ (Bill) ပုံမှန်ပေးရဲ့လား၊ လက်ရှိမှာ သင့်ဆီမှာ အကြွေးဘယ်လောက်ရှိလဲ။ ငွေချေးခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၊ အပေါင်စာချုပ်နဲ့ ငွေချေးပေမယ့်သူဟာ သင့်ရဲ့ အကြွေးစာရင်းအဟောင်းတွေကို သိချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကုန်စစ်ထားပါ။ နောက်ထပ်အကြွေးကဒ်ထပ်ရှိသေးလား။ငွေချေးမယ့်သူတွေဟာ သင့်ရဲ့ ဘဏ်ကဒ်တွေ၊ ကားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်ချေးငွေတွေကို စစ်ဆေးမှာမို့ ကြိုပြင်ဆင်ထားပါ။
အဆင့်(၂) - သင်ဘယ်လောက် ပမာဏသုံးမလဲဆိုတာ ကြိုတင်မှန်းထားပါ။
သင်ဘယ်လောက်သုံးဖို့ဆန္ဒရှိလဲဆိုတာ ကြိုတွက်ပြီးရင် ကိုယ်သုံးမယ့်ပမာဏအတွက် အပေါင်စာချုပ်နဲ့ ချေးငွေယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်ဟာ အိမ်ရာစျေးကွက်ကို သုတေသနပြုလေ့လာဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီး အိမ်နီးနားချင်းတွေက နေတစ်ဆင့် အကြံဉာဏ်ရယူပြီး ဘယ်လိုအိမ်မျိုးကိုသင်သက်သာစွာနဲ့ဝယ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုချေးငွေယူရမလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာထားပါ။
အဆင့်(၃) - အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တစ်ယောက် ရှာပါ။
သင့်ရဲ့ အိမ်ဝယ်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှာ ကူညီပေးဖို့ အကျိုးဆောင်တစ်ယောက်ရှာပါ။ သိပ်မကြာသေးခင်ကထိ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တွေကို တကူးတကရှာဖွေပြီး ရွေးချယ်တဲ့အလေ့အကျင့်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် အကျိုးဆောင်ဆီသွားပြီး စကားပြောကြည့်ပါ။ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် အကျိုးဆောင်ကို ရွေးချယ်ငှားပါ။
အဆင့်(၄) - ငွေထုတ်ချေးမယ့် ကုမ္ပဏီဆီက ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ရယူထားပါ။
သင့်ကို ငွေထုတ်ချေးမယ့်ကုမ္ပဏီဆီက ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူထားခြင်းဟာ စိတ်ချရပြီးစမတ်ကျတဲ့ စီစဉ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ငွေကြေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေမယ့် ငွေချေးမယ့်ကုမ္ပဏီဆီက ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီဆိုရင် သင်ဝယ်မယ့် အိမ်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ သင့်အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုရှိမှာဖြစ်လို့ လွယ်ကူစေပါတယ်။
အဆင့်(၅) - အိမ်စရှာတော့။
သင့်ရဲ့ အိမ်ရှာရှော့ပင်းအစီအစဉ်ကို စတင်လို့ရပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ သင်ငှားထားတဲ့ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်နဲ့ စကားပြောဖို့ လိုအပ်ပြီး သင်တို့နှစ်ယောက်လုံး ခေါင်းချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးရမယ့် အချိန်ပါပဲ။ သင်လိုချင်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးကိုက်ညီမယ့် အိမ်ရာတွေကို အကျိုးဆောင်က ယူလာခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေ၊ Listing တွေကို လိပ်စာတွေအတိုင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်(၆) - သင့်တော်တဲ့ငွေကြေးပေးမယ်လို့ ပြောထားပါ။
အိမ်ဝယ်မယ့်သူအများစုအတွက် ဒီအချက်ဟာ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်လိုချင်တဲ့အိမ်ကို ရှာတွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင် သင့်တော်တဲ့ငွေကြေးပေးမယ်လို့ ပြောပါ။ ဒီနေရာမှာ သင့်အကျိုးဆောင်ပေးထားတဲ့ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ် Listing ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စျေးနှုန်းကို သတိရပါ။ သင့်ရဲ့ အကျိုးဆောင်က စျေးကွက်ကိုနားလည်ပြီး သင့်ကို အကောင်းဆုံး လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကြိုက်တဲ့အိမ်ကို တကယ်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ မကြိုက်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ အဆင့်(၅)ကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပါ။
အဆင့်(၇) – နေရာအထားအသိုအတွက် အိမ်ကိုစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း။
အဆင့်(၆)အတိုင်းသင့်ရဲ့ သင့်တော်တဲ့ငွေကြေးကို သဘောကျလို့ သင့်ကိုရောင်းမယ်သူက လက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အိမ်ကိုစစ်ဆေးမယ့်သူကို ရှာပါ။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်ပစ္စည်းတွေထားမလဲဆိုတာကို တိုင်းတာပြီး နေရာချဖို့ အချိန်ယူပြင်ဆင်ပါ။
အဆင့်(၈) အာမခံရယူခြင်းနှင့် အသုံးဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းစတင်ပါ။
အိမ်ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ အာမခံကုမ္ပဏီဆီမှာ သင့်ရဲ့အိမ်အတွက် အာမခံထားပါ။ သင်က အိမ်ရှင်အသစ်ဖြစ် ကြောင်း အာမခံကုမ္ပဏီကိုပြောပြီး မူဝါဒအသစ်တွေ ရေးဆွဲခိုင်းပါ။ တကယ်လို့သင့်ဆီမှာ အာမခံကုမ္ပဏီမရှိရင်တော့ အခုချက်ချင်းရှာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် သင့်ရဲ့ ငွေချေးကုမ္ပဏီရဲ့စည်းကမ်းချက်ထဲမှာ အာမခံလုပ်ဖို့ ကိစ္စ ပါဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သုံးစွဲမယ့် လျှပ်စစ်မီး၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စတဲ့ အသုံးဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် အသုံး ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေဆီသွားပြီး သင်အိမ်ပေါ် စ နေမယ့် နေ့ကို အသိပေးပါ။
အဆင့်(၉) - စာချုပ်ချုပ်မယ့်နေ့
အထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ သင်အိမ်ပိုင်ဆိုင်မယ့်အကြီးမားဆုံးနေ့တစ်နေ့ကို ရောက်လာပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ လက်မှတ်ထိုးဖို့ စာချုပ်ကို သေချာဖတ်ပါ။ ပြီးရင်လက်မှတ်ထိုးပါ။ သင့်အနေနဲ့ စိတ်ပင်ပန်းနေမယ်ဆိုပေမယ့် ဒီအဆင့်ကတော့ သင့်ရဲ့အိမ်ကိစ္စ ရှာပုံတော်ပြီးဆုံးဖို့နီးစပ်လာခဲ့ပါပြီ။
အဆင့်(၁၀) - အိမ်သော့ယူပြီး ပစ္စည်းတွေစရွှေ့တော!
ကဲ! ဒါဆိုရင် သင်အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီ။ သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ အကြိုက်ဆုံးအိမ်တစ်လုံးရသွားပါပြီ။ အိမ်ဝယ်ခြင်း ခရီးစဉ်ကနေ အိမ်ပိုင်ခြင်းခရီးစဉ်ကို စတင်လိုက်ပါတော့။
Credit : Home Buyer Guide